Chii chiri chokwadi nezvekurwiswa nerufu semhedzisiro yekufamba netsoka mu Assen? : Martin Vrijland
Akaiswa mukati NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	musi wa 26 August 2019	• 5 Comments
Yakanga iri nyaya inoshamisa kwazvo mune vezvenhau Mugovera wapfuura. Uye kunyanya seni iyi kubvunzurudzwa na meya Marco Kunze kune webhusaiti yeNOS inotarisa kumashure, kunzwa kwakasimba kwehutumbo hwekuita kunouya pamusoro zvakare. A pedophile anorohwa nevarume ve5; anomuuraya chaiko kusvika pakufa. Musikana ane makore mana ekuzvarwa anofanirwa kuita unzenza munhandare yekutamba, saka unochera shamwari dzako dzese kuti urove iyo pedophile pamwechete. Izvo hazvinzwika zvakavimbika here? Kwete, hazvinzwika saizvozvo.
Ini ndinogona kufungidzira kuti kana chimwe chinhu chakadai chakaitika, iwe ungochiuraya pakarepo. Haufanire kunzvera shamwari ina dzeizvozvo. Kunze kwekunge pedophile aive MMA akasununguka mhare, asi izvo zvinoita senge zviri kunze kwemutsara netarisiro.
"Chii chaitika manje, ndoita sei nazvo, ndanyatsoonei?”Meya Marco Out anodzika zvishoma zvakanyanya mushe muNOS bvunzurudzo. Mumiririri anotaurira nyaya yake muvhidhiyo yekutanga (ona NOS chikamu) zvakare ari akapfava kwazvo mukutaura kwake uye mukati medu tinoona kuti tende rinosimudzwa sei kumashure, zvekuti pachokwadi hapana chichaonekwa kune vagari venzvimbo. Muchidimbu: pane mukana wakanaka wekuti tichazove zvakare kubata nekunyepa kwenhau kuburitsa kwenhau dzinozivikanwa. Iyo monkey nyaya nyaya mumamiriro ekukura 'Dambudziko, Reaction, Solution". Zvinoita sei ipapo? Zvakanaka, iwe unogadzira (yakazvisarudzira) dambudziko. Inokumbira maitiro (kuburikidza nevezvenhau uye vezvenhau) pakati pevanhu uye inova nechokwadi chekuti munhu wese akatsamwira zvakakwana kuti ape mhinduro. Icho chinogara chiri mitsva yakaoma mutemo.
Wakatofungidzira kuti mutemo mutsva wakasimba uchavei mushure menhau kubva kuAssen: kuchengetedza kwakawanda kwazvo, kuitira kuti tirege kuvarova pamwe chete. Chero zvazviri, pedophile anogashira munhu anenge arwiswa nenzira iyi uye nezvese zvaunopa chimiro chemunhu akabatwa, iwe unoda kupa pachivande chinzvimbo chekuziva. Ingomirira. Ini ndinofanotaura kuti iri kuuya munguva pfupi.
Tine hurombo, asi hazvina basa kwandiri kuti shamwari dzako dziri kudhira kurova pedophile. Iwe unogona chete kuita izvo sekutanga unongozvifunga iwe pachako. Shamwari hadzisi kuzokubatsira kurova mumwe kusvika parufu, nekuti shamwari dzinozonongedza iwe kuhuwandu hwemakore iwe unofanirwa kupfuura nemabhawa. Uyezve, idzo shamwari ikozvino dzinofanira kuenda shure kwemazariro uye kutaura chokwadi, handitende kuti mweya wakadai wekuzvipira wakadzika midzi mundangariro dzemunhu akaenzana wechiDutch. Wese munhu anofunga nezve yake imba, muti, chikara, saka iwe hausi kuzobatsira shamwari kurova mumwe munhu kuti afe. Isu tave zvakare kupupurira imwe fake nhau kugadzirwa, nevatambi vacho vamunoona mumafirimu sevavarwi vakuru. Nyara pauri!
Ndiani anoyeuka kuponda kwababa baba Jeroen Denis pavanakomana vake Ruben naJulian? Fake news check
Tags: 4, Assen, meya, Dood, Featured, kurohwa, Marco, musikana, nhau dzakaipa, panze, pedophile, akaurayiwa, vana, ndine makore mana
Gadzira / gadzira uye hype chiitiko chekubatwa, isa toni uye masheji haaone chikonzero
kutenda kuti havasi kuzouya nechimwe chinhu chakadai.
Zvinonyadzisa kuti vakatora vhidhiyo yaJoris Chokwadiseeker nezvemutemendi wekrete kubva mumambure, iyo
Chokwadi hachigoni kuuya mupfungwa dzako.
grey akanyora kuti:
ndechipi mutsauko wakaitika pano kana chii chakaitika kune ngowani pasi yakarova munhu akashusha mwanasikana wake nefoshoro ndokuenda kujeri kwenguva yakareba.
Akange anyevera mapurisa, asi haana kuuya, saka akapindira.
Asi hongu une musiyano mukutonga.
Ehe, iva ne 'pamusoro pemutemo' kururamisira, kururamisa kwemhomho nesipo ruramisiro kuti vakwanise kusimbisa mirairo yemhomho
Rarama mumadota iwe pachako, hausati wambonzwa nezvevanhu kubva kumadota ivo pachavo. Ndakave neappie uye ipapo ini ndakawana ..
Nyaya yaive yekuti yaive yekutanga pedo, ok ndobva ndafunga kuti ndizvo chaizvo. Izvozvi zvakare zvinonzi zvakare ndeye matsi uye mbeveve martin .. kana munhu akafa chaiye handizive chokwadi, asi nemurume we5 pa1 munhu obva audzwa kuti vachaburitswa neSvondo nekuti painge pasina umboo nazvo kushungurudzwa (kurohwa kusvika parufu uye ipapo pasina chiratidzo? Hmm) ...
Logic uye kujekesa hachisi chinhu chemapurisa uye nevezvenhau, asi isu tatoziva kuti kare ..
Kufanana nezvimwe zvinhu, ichi chimwe chinhu munhu wose chaachakanganwa mumwedzi kana 2 uye ipapo iyo mitsva nemirairo yatopunzirwa kuburikidza .. zvakajairwa shit asi hapana ane hanya!
Kheb ichi kubva rtvdrenthe uye axes nhau. com
Kutenda zvakare nekuzvipira kwako zvakare martin
« MaAmazon ari kutsva, mapapu epanyika ari pamoto!
Yolanthe Cabau nemapurisa akateerana neDNA, inoyevedza John de Mol kugadzirwa (sezvakaita nhau ye ANP) »
Kushanya kwakazara: 4.142.226